उपनिर्वाचनअन्तर्गत मतदान जारी, कास्कीमा मतदानस्थल नजिकै बम विष्फोट « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
उपनिर्वाचनअन्तर्गत मतदान जारी, कास्कीमा मतदानस्थल नजिकै बम विष्फोट
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ मंसिर शनिबार ०९:०५
काठमाडौं । उपनिर्वाचनअन्तर्गत तीन तहका रिक्त ५२ पदका लागि मतदान जारी छ । उपनिर्वाचन हुने स्थानमा आज बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु भएको हो ।
मतदाताले अपराह्न ५ बजेसम्म मतदानस्थल पुगेर मतदान गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाको ३ र स्थानीय तहका ४८ स्थान रिक्त छन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तथा कास्की क्षेत्र नं. २ का सांसद् रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि यो स्थान रिक्त छ । त्यस्तै, प्रदेशसभाको भक्तपुर १(क), बागलुङ २(ख), दाङ ३(ख) मा पनि आज मतदान भइरहेको छ ।
स्थानीयतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि मतदान भइरहेको छ । पाँचथरको फाल्गुनन्द, संखुवासभाको मकालु र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । त्यस्तै, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका रिक्त ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि पनि आज मतदान भइरहेको छ ।
रिक्त यी पदका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ३ सय ३७ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
यसैबीच, कास्की क्षेत्र नं. २ को मतदानस्थल नजिकै बम विस्फोट भएको छ ।
पोखरास्थित नयाँबजारको नवप्रभात माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदानस्थलनजिकै बम विस्फोट भएको हो । मतदान भइरहेका बेला कसैले माथिबाट बम फालेको र विस्फोट भएको बताइएको छ । बम विस्फोट भएपछि उक्त मतदानस्थलको मतदान केहीबेर रोकिएको थियो ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १,३८१ डलर, सार्वजनिक ऋण भार ६३ हजार ३१० रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीको भागमा सार्वजनिक ऋणको भार ६३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड पुग्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको
ओलीलाई देउवाको प्रश्नः ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्षअघि तयार भएको हो, त्यतिबेला किन बुझिएन त ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका
छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा भएका छिटपुट घटनालाई लिएर